Music ayaa baroque waa style a classic music, taas oo asalkiisu ka soo jeedo oo xiliyo hormariyo. Baroque Eraygii waa eray Portuguese, taas oo ka dhigan tahay luul ah misshapen, waxaa la siiyey magaca sababtoo ah music ah loo malaynayay in arrin xun in muddo music this. Xilligii baroque waxyoonay tonality badan oo dheeraad ah ku music by daray farsamooyinka ciyaareed oo baahsan burburin classical. Style ayaa baroque ayaa gacan ka geystay samaynta qaybaha muusikada sida opera, cantata, sonata, oratorio iyo Concerto. Qaar badan oo ka mid ah qaab baroque wali la isticmaalo burburisaan music maanta. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah composers baroque ugu caansan oo gogo 'oo ay music ugu fiican u yaqaan.
Qaybta 1.Johann Sebastian Bach
Qaybta 2.George Frideric Handel
Qaybta 3.Henry Purcell
Qaybta 4.Antonio Vivaldi
Bach uu ahaa miyuusikiiste Jarmal iyo laxamiistaha muddada Baroque markii music. Walxuhu lagu aadka u qadarin ay qaninimada iyo qurux farshaxanka. Qaar ka mid ah walxuhu uu ugu fiican u yaqaan waxaa ka mid ah Goldberg Isbadalka, Brandenburg Concertos iyo Mass in yar B. Waxa uu sidoo kale mas'uul ka yahay la abuuro in ka badan saddex boqol oo cantatas, inkastoo qaar ka mid ah cantatas ee ka lumay muddo ka dib, ku dhawaad ​​laba boqol oo weli ay u noolaadaan.
Handel ahaa laxamiistaha u dhashay Jarmalka oo waa ugu caansan uu concertos xubin, operas iyo heesta. Mid ka mid ah ka qabtaa xabbadood la jecel yahay ugu yahay Masiixa, oo gogo 'oo kale si fiican u xusay waxaa ka mid ah dabaaldega heesta, Music Biyaha, Trio Sonatas op. 5, Concerto Grosso op. 6 iyo Music for Royal Rashka. Waxa uu sidoo kale waxaa la og yahay in ay ka kooban oratorios xarig dheer oo ay ka mid Yashuuca, Sulaymaan, The Choice ee Hercules iyo Jeptha.
Laxamiistaha Purcell Ingiriisi ayaa lagu yaqaanay ku mideysan yihiin xubno Talyaani iyo Faransiis galay darey. Purcell si dhab ah loo malaynayo in ay mid ka mid ah composers weyn Ingiriisi ah waqtiga oo dhan. Shuqulladiisa oo ka mid ah Dido iyo Ayne'asow, Laba iyo toban Sonatas iyo Kac aan Muuse. Inkasta oo uu sidoo kale lagu tiriyaa ugu leh shuqulka afuufaa Voluntary intan yar ku qoran lama isaga by at dhan, laakiin halkii ay qoreen Yeremyaah Clarke.
Wuxuu ku dhashay barakiciyay 4-tii Maarso 1678, Antoni Vivaldi noqday kuwa loo yaqaan laxamiistaha caan ah si kastaba ha ahaatee uu sidoo kale loo yaqaan macalin, wadaad iyo violinist. Aqoonsaday mid ka mid ah kuwa ugu fiican u yaqaan composers Baroque uu muusikada saamayn lagu arki karaa dhammaan Europe oo dhan. Vivaldi ugu fiicnaa ee uu gabal muusikada Four Seasons oo waa Concerto rabaab ah. Waxa uu sidoo kale lagu yaqaanaa 12 sonatas, L'estro Armonico iyo La Stravaganza (The Extravagance).
> Resource > Music > Top Baroque Composers oo ay caan ku Music